Kobo Aura Edition 2, ihe ijuanya a na-atụghị anya ya na Kobo | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Joaquin Garcia | | ndị na-agụ akwụkwọ, Kobo
Yesnyaahụ dị mkpa maka ụmụ okorobịa na Kobo kamakwa maka ndị na-achọ eReader ọhụrụ ka e gosipụtara eReaders abụọ na-atọ ụtọ maka ahịa, ọ bụghị naanị maka imewe ma ọ bụ nha ha kamakwa maka ọnụahịa ha. Anyị niile tụrụ anya onye Kobo Aura One, ma anyị amaghị ihe ọ bụla banyere Kobo Aura mbipụta 2, eReader ọdịnala nwere aha ọjọọ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ a na-atụle ugbu a.
Ngwaọrụ a nwere a 6 inch ihuenyo, otu nke dị 8 sentimita asatọ mana nke ahụ na ndị ọzọ eReaders dịka Kindle Paperwhite 3, Cervantes 3 ma ọ bụ Kobo Glo HD n'onwe ya. Ọzọkwa, ọtụtụ na-atụle nke ahụ Kobo Aura Edition 2 bu nkwalite na Kobo Glo HD.
El Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ...Kobo Aura Edition 2 ″ /] nwere ihuenyo 6-inch Teknụzụ akwụkwọ ozi, ihuenyo mmetụ na ọkụ, iji bụrụ teknụzụ kachasị mma ComforLight na mkpebi nke 1024 x 768 pikselụ; ma na nke a anyị enweghị otu njupụta nke pikselụ kwa inch dị ka Kobo Glo HD, ndị Kobo Aura Edition 2 nwere 212 ppi. Ọtụtụ ihe na-erughị Kobo Glo HD.
Kobo Aura Edition 2 ga - ekerita imewe ya na Kobo Aura One
Nzube nke Kobo Aura Edition 2 bụ otu ihe ahụ dị ka Kobo Aura One, ma na ibelata, nke a bụ 159 x 113 x 8,5 mm na 180 gr. Nke a bụ ihe ijuanya n'ihi na o nwere ibu dị ukwuu mana ọ na-ekenyekwa ihe na eReader ọzọ, ihe na-emebeghị ogologo oge n'etiti Kobo eReaders, nke nke ọ bụla nwere ụdị dị iche.
Banyere ngwanrọ na ụdị, Kobo Aura Edition 2 ga-enwe otu ihe ahụ ụmụnne ya ndị okenye, gụnyere ohere ịgbaziri akwụkwọ site na Overdrive. Kobo Aura Edition 2 agaghị enwe oghere maka kaadị microsd, yabụ 4 Gb nke nchekwa dị n'ime ga-adị mkpa.
Ọnụ ego nke Kobo Aura Edition 2 ga-adị ka Kobo Glo HD, mana ihe ruru dollar iri dị ọnụ ala, ya bụ, ihe dị ka dollar 119. Ọnụ ego dị ala maka ndị nwere afọ ojuju na eReader dị otú ahụ, mana maka dollar iri ọ nwere ike ịba uru maka ịhọrọ Kobo Glo HD, nke nwere ihuenyo nwere mkpebi ka mma.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọtụtụ ga-ahọrọ Kobo Aura One, Kobo Aura Edition 2 bu ezigbo uzo nke otutu, ma ndị na-achọ ọnụ ala na ndị na-achọ inwe ike na eReader ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Kobo Aura Edition 2, ihe ijuanya a na-atụghị anya ya na Kobo
Azụtala m na FNAC na Barcelona ma enwebeghị m ike iji ya mee ihe ọ bụla. Echere m na FNAC emeela azụmahịa ọjọọ site na ịgbanwe ụdị na enweghị nke ha.
Zaghachi alfredo gutierrez
Achọrọ m ịgbanwe onye na-agụ m ma enwere m obi abụọ n'etiti abụọ, nke a bụ mbipụta kobo aura 2 ma ọ bụ Tagus Iris 2017, obi abụọ m abụghị maka usoro ọ ga - agụ, ọ bụ karịa n'ihi akwụkwọ ikike, m ghọtara na kobo ga-ezipụ ha na Spain ọ bụrụ na ọ nwere mmejọ, mana amaghị m ma ọ dị otu a. Kedu onye kpochapu ị ga-adụ m ọdụ ka m zụta n'aka abụọ ahụ.
Mba, ya na Kobo, oburu na ihe adabaghi, ha gbanwere ya ozugbo na ulo ahia, o di mfe ... N’etiti ha abụọ, obi abụọ adịghị ya na Kobo, ihe maka ọdịnaya karịa ngwaọrụ. Ihe ọ bụla dị na dijitalụ nwere Kobo, ọ nweghị ihe jikọrọ ya na Tagus ma ọ bụ BQ, ọ dị nwute ...
Enwere m ike idetuo na mado akwụkwọ na pc m?
Zaghachi na chiry
M na-agbalị na ihe nlereanya ahụ, ma na m ochie Aura, enweghị nsogbu. M na-eji Caliber maka nke ahụ (caliber-ebook.com) na ọ na-arụ ọrụ zuru oke.
Zaghachi na akwụkwọXlibre
Ebook a yiri nke Globo 2012 n'okpuru aha ọzọ. Ọbụna teknụzụ emetụ aka, nke bụ nzọụkwụ azụ site na ikike, nri?
Enwere m nsogbu na nke Aura, m were ya na fnac, ha zigara ya na ọrụ ọrụ aka na izu 1 ha zitere m nke ọhụrụ. Ọrụ zuru oke.
Azụtara m kobo aura 2 n'ihi na m ga-aga njem ma n'echiche m na ọ bụ ihe efu, ọ ga-esiri m ike inwe mmasị n'ịgụ ihe a. Ọ dị oke nwayọ, dịka ịlaghachi na mbido kọmputa ma nke ahụ na-akpali naanị akwụkwọ ndị dara ole k. Ọrụ dị mfe nke ịlele akwụkwọ ndị ị nwere ma ọ bụ ịhazi ya bụ nwayọ ma na-agwụ ike, ọrụ mmetụ ahụ na-egbu mgbu, ị na-amịpụta ma họrọ ihe, ọ na-aga na igbu oge dị ịtụnanya ma e jiri ya tụnyere mgbe ị metụrụ ihuenyo ahụ aka. Ibe akwukwo, ederede, adighi adaba na obosara nke ihuenyo ma gha igwu ya na mbughari, nke bukwara uru, o gaghi ekwe omume iwelie obere percentages, ma obu oru ka emegharia maka akwukwo obula. uzo! ugbu a ọ ga - apụta na otu onye were afọ 20 jiri ngwa elektrọnik agọnahụ ya bụ onye na - agụ kobo a. Ọ na-aga naanị ihe na-abụghị ihe nke mmiri, ruo n'ókè nke na m na-aga google ma chọọ ebe m ga-ahapụ echiche ịdọ aka ná ntị a maka ndị na-azụ n'ọdịnihu. Maka € 100 azụrụla ihe a !!!!